Qarax ka dhacay Muqdisho iyo mid kale oo lala eegtay ciidamada Amisom – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Qarax ka dhacay Muqdisho iyo mid kale oo lala eegtay ciidamada Amisom
Qarax ka dhacay Muqdisho iyo mid kale oo lala eegtay ciidamada Amisom
Beegsonews– Qarax ka dhashay miino dhulka lagu aasay, ayaa maanta ka dhacay Wadada aada degmada Dayniile ee ka leexata Aargada laga galo degmadaas, ee magaalada Muqdisho.
Miinada ayaa waxaa la sheegay in uu qabsaday qaraxa gaari ay wateen dad Shacab ah.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in gaariga uu qaraxa qabsaday xilli uu marayay agagaarka Isbitaalka guutaale oo ku yaalla Wadada Jaayga ah ee Aada Xarunta degmada Deeyniile,I sla markaana ay ku dhaawacmeen saddex qof oo mid ka mid ah uu yahahay Dhaqtar.
Gaariga Miinada la qaraxday oo noociisu yahay Surf Tri Rz ayaa waxaa sidoo kale soo gaaray burbur xoogan, iyada oo dadkii qaraxaasi miino ku dhaawacmay la geeyey mid ka mid ah Isbitaalada Magalada Muqdisho.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa waxaa ay gaareen Goobta uu qaraxa ka dhacay, iyaga oo xiray Wadada mudo daqiiqado ah wallow markii dambe ay dib u fureen.
Dhinaca kale, wararka laga helayo deegaanka Buulo-Mareer ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in duhurnimadii Maanta deegaankaas qarax lagula eegtay Ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.
Kolonyo ka tirsan AMISOM ayaa xilli ay ku socdaalayeen deegaanka Buulo Mareer waxaa lala eegtay qarax miino, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in qaraxa kadib ay maqleen rasaas xoogan oo ka dhaceysay goobta uu qaraxa ka dhacay.
Khasaaro ayaa la sheegay in qaraxaas uu kasoo gaaray ciidamada AMISOM, waxaana Al-Shabaab warar ay ku daabaceen Baraha Internet-ka waxa ay ku sheegeen in dhamaan askartii saarneyd mid ka mid ah Gawariada AMISOM ee uu qaraxa qabsaday ay geeriyoodeen.
Si kastaba Saraakiisha Midowga Afrika ee AMISOM weli kama hadlin khasaaraha ka dhashay qarax Ciidamadooda lagula eegtay deegaanka Buulo Mareer iyo Warka kasoo baxay Ururka Al-Shabaab.